အလင်းရောင်ကြယ်များ: Gmail အတွက် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း (၈၀)
၁။ “http://philwilson.org/blog/2004/12/search-your-gmail-in-firefox.html” ဟုရိုက်ပါ။
၁။ http://www.softpedia.com/progDown-load/Gmail-Drive-shrll-extensiondownload-15944.html ဟုရိုက်ပါ။ (သို့မဟုတ် http://www.softpedia.com ရဲ့ search box မှာ ၀င်ရောက်ရှုာဖွေ လို့ရပါတယ်။)
http://richard.jones.name/google-hacks/gmail-files-system/gmail-files-system.html မှာ အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
GCount – http://versiontracker.com/dyn/moreinfo/macOSx/2374Gmail+Growl2.0 – http://waffsoftware.net/gmailgrowl/
http://lifehacker.com/software/hack-attack/build-advanced-gmail-filters-and-persistent-searches-276499.php~ hotmail,yahoo mail, ဒါမှမဟုတ် outlook express မှာရှိတဲ့ email စတဲ့ mail မျိုးစုံကို စုစည်းပြီး Gmail ထဲကို ပို့ဆောင်နိ်ုင်စေဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုတော့ အခုနေရာမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
http://www.zoliblog.com/blog/archives/2007/3/28/2840555.html~ တကယ်လို့ Gmail user တစ်ယောက်ယောက် သေဆုံး သွားခဲ့ရင် အဒီ account ကို ကိုယ် ရယူနိုင် သလား ဆိုတာ ဟာ အလွန် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှ ပါတယ်။
http://seroundtable.com/archives/013645.html~ Gmail ကသာ https layer ကို သုံးစွဲပေမယ့် သူ့ကို ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ပံ့ နေတဲ့ တချို့ features တွေဟာ SSL ကို မသုံးစွဲ နို်င်ပါဘူး။ ‘SSL’ ကို မသုံးစွဲ တတ်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တွေဟာ လုံခြုံ သင့်သလောက် မလုံခြုံဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆ ချက်တွေနဲ့ သံသယပွား နေရင် အခုလိပ်စာမှာ ၀င်ရောက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
http://wikihow.com/Hack-Gmail-Notifier-to-Use-SSL~ Gmail မှာရှိတဲ့ contacts လိပ်စာတွေဟာ Gtalk သုံးစွဲ သူ အချင်းချင်း နဲ့ တခြား Gmail ကိုလက်ခံတဲ့ IM services တွေ အတွက် လက်ခံပါတယ်။ yahoo,hotmail တို့ဟာလည်း သီးသန့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် hotmail ထဲမှာ ရှိတဲ့ contacts လိပ်စာတွေကို Gmail ထဲကို ရွှေ့ပြောင်း ထားနိုင်ရင် Virus နဲ့ spam အန္တရာယ် တွေကအစ ပိုပြီး လုံခြုံ နိုင်မှာပါ။
http://e-eseasy.com/Import-Hotmail-Contacts-Gmail-aspx~ Gmail ထဲမှာ ရှိတဲ့ message တွေမှန်သမျှ ‘outlook’ express ကနေ တစ်ဆင့် လက်ခံပြီး အလိုအလျှောက် download လုပ်ဆောင် နေစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတချို့က်ိုတော့ အခုလိပ်စာမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
http://greektronica.com/2007/04/07-howto-redownload-gmail-messages(into-outlook)~ Gmail ထဲက message တွေကို ‘backup’ လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တခါတလေ များတွေးတောမိ ပါသလား။ အလွန်လွယ်ကူတဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေနဲ့ Gmail ကို backup လုပ်ဆောင်စေနိုင်မယ့် အကြံပြုနည်းလမ်း တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာက်ို သွားရောက် လေ့လာကြည့်သင့် ပါတယ်။
http://greektronica.com/2007/03/29/using-google-groups-to-backup-gmail~ Gmail ကနေ တစ်ဆင့် google calendar ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပျြု နိုင်ပြီး gmail inbox ထဲမှာ ရက်စွဲ တစ်ခုချင်းအလိုက် လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း ပို့ဆောင်မယ့် Mail တွေက်ို စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့် အလမ်းတချို့ကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
http://blogoscoped.com/archive/2007-04-25-html~ ‘Ubuntu’ ဟာ ‘xp,OSX,Limix’ တို့လို operation system တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ XP လို မဟုတ်ပဲ မြင့်မားတဲ့ လုံခြုံရေး စနစ် ရှိပြီး open-source အနွယ်ဝင် ဖြစ်တဲ့အတွက် progrmmar တွေ လောကမှာ အလွန်သတင်း မွှေးပါတယ်။ အခုလိပ်စာမှာတော့ ‘ubuntu’ OS အပေါ်မှာ Gmail က်ို Client software တစ်ခု အနေနဲ့ လုပ် ဆောင်ဖို့ နည်းလမ်း တွေကိုလမ်းညွှန် ပြသ ထားပါတယ်။
http://howtogeek.com/howto/ubuntu/set-gmail-as-defult-mail-client-in-ubuntu/~ Google calendar နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Gmail အတွင်းထဲ မှာရှိတဲ့ လိပ်စာရှင်တွေ ဆီကို အလိုအလျှောက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက်
-desktop-251219.php~ Gmail အတွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ fonts,font size,smiley icon စတာတွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ မတွေ့ခဲ့ရ သေး လျှင် ဒီနည်းလမ်း တွေကိုသာ လုပ်ဆောင် ကြည့်မယ် ဆိုရင် Gmail ရဲ့ ဖုံးအုပ် ထားတဲ့ လျှို့ဝှက် ချက်တွေကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ (အထူးသဖြင့် better Gmail ရဲ့ extension လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်းပြသ ပေး ထားတဲ့ အတွက် အားကိုးရတဲ့ tip တွေဖြစ်ပါတယ်။
http://5thirtyone.com/archives/821~ သင့်မှာ ရှိသမျှ Email account တွေကို Gmail နဲ့ အတူ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကို တစ်စု တစ်ဝေးတည်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း များကို ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ်။
http://z-co.com/blog/2007/06/manage-all-your-email-account-with-gmail~ ‘Fetchmail’ နဲ့ အတူ Gmail ကို ‘backup’ လုပ်ဆောင် နိုင်ဖို့ လမ်းညွှန် ပြသမှုတွေကို ပုံစာတွေ နဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
http://lifehacker.com/software/gmail/geek-to-live-back-up-gmail/with-fetchmail235207.php~ ‘mozilla’ အဖွဲ့ အစည်းက ထုတ်ဝေ ထားခဲ့တဲ့ အခမဲ့ email software ဖြစ်တဲ့ ‘Thunderbird’ ကို ကိုယ့်ရဲ့ email client တစ်ခု အနေနဲ့ ‘default’ ထားခဲ့မယ် ဆိုရင် Gmail ကို client mail တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးစွဲ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Gmail client mail server attachment Disk mail storage ‘Thunderbird’ ‘Gmail’
http://email.about.com/od/mozilla-thunderbird-tips/qt/et12160.html~ IMAP တစ်ခု အနေနဲ့ Gmail ကို သုံးစွဲ နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း တချို့ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ကို သာ အပြည့်အ၀ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် offline ဖြစ်နေချိန်မှာတောင် Gmail inbox ထဲက message တွေကို စိတ်အေးလက်အေး ဖတ်ရှုနေလို့ ရနိုင်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
http://downloadsquad.com/2007/07/11/how-to-use-gmail-ove-imap-and-tag-your-mail-too/~ Microsoft ထုတ် outlook (email client software ),Gcal (Google calender), Ipod (apple ရဲ့ သီချင်း ဖွင့် စက်),mobile phone အစရှိတဲ့ Gmail ကို လက်ခံ ပေးပို့နိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ် တွေနဲ့ Gmail ကို ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ချိတ်ဆက် မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
http://internetduct-tape.com/2006/08/11~ ‘FirePG’ extension ကို နားမလည် သဘောမပေါက် သေးတဲ့ လူတွေအတွက် အဲဒီ extension ကို အသုံး ပြုပြီး Gmail အတွင်းမှာ message တွေကို ဘယ်လို နည်းလမ်း မျိုးနဲ့ ရုပ်ဖျက်မလဲ ဘယ်လို သော့ချက် တွေကို သုံးစွဲပြီး ပြန်လည် ပုံဖော် မလဲဆိုတာတွေကို ရှင်းပြ ထားတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
http://Linux.com/artic-les/62369~ Gmil attachment ဖိုင်တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အကြောင်းတွေကို အစုံအလင် တွေ့ရပါမယ်။ ဘာကြောင့် ‘zip’ extension တွေကို လက်မခံ ရတာလဲ။ attach မှာ ‘.exe’file တွေကို ဘယ်လို တွဲချိတ် ပို့ ဆောင်နိုင်မလဲ။ ‘.doc’ extension တွေနဲ့ mail တွေကို ဖွင့် ဖတ်သင့် မသင့် အစရှိတဲ့ gmail ရဲ့ ‘attach’ file တွေနဲ့ ပတ်သက်သမျှ လမ်းညွှန် ပြသပေး နေတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစပါတယ်။
http://googlesystem.blogspot.com/2007/04/gmailaqttachments.html~ Gmail server ကနေ တရားဝင် ပိတ်ပင် ထားတဲ့ file type တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ‘.jar’,’exe’,zip’ စတဲ့ file extension တွေကို လှည့်ကွက် တစ်ခုအနေနဲ့ ပို့ဆောင် နိုင်စေဖို့ guide line တွေဖြစ်ပါတယ်။အလွန် လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ဖြစ်တာမို့ တစ်မဟုတ်ချင်း နားလည် သဘောပေါက် သွားနိုင်ပါတယ်။
http://labnol.blogspot.com/2005/12/cheat-gmail-antivirus-scanner-attach-html~ တခါတလေမှာ ကိုယ့် Gmail inbox ထဲကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်တောင် မမှန်းဆမိတဲ့ spam ကြော်ငြာတွေ ရောက် နေ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြော်ငြာတွေကို ကိုယ့် Gmail လိပ်စာထဲကို ဘယ်သူတွေက လမ်းညွှန် လိုက်တာ ပါလိမ့် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရှင်းလင်းပြထားပြီး spammers တွေကို လိပ်စာ ရောင်းစားနေတဲ့ သံသယ ရှိတဲ့ website တွေကို ဘယ်လို တြုံ့ပန်ရမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
http://hedir.com/introduction/about/17942.html~ ‘postFix’ နဲ့ Fetch-mail’ ကို သုံးစွဲပြီး Gmail ကို Linux အပေါ်မှာ ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ Linux နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ဟန်ပန်တွေက်ို အတုယူပြီး လုံခြုံ ပြည့်ဝတဲ့ Gmail တစ်ခုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာကို အောက်ပါ လိပ်စာမှာ လေ့လာ အကဲခတ် နိုင်ပါတယ်။
http://labnol.blogsport.com/2007/03/gmail-delete-keyboard-shortcuts-works-in-html~ Google ကနေ တရားဝင် တည်ဆောက် ပေးထားတဲ့ ’shortcuts’ တွေကို တော့ ရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် ဖန်တည်း ထားတဲ့ label တွေ အတွက် ’shortcuts’ တွေ လိုချင် သေးရင်တော့ google system မှာ အကြံပေး လမ်းညွှန်ချက် တွေနဲ့အတူ ရရှိမှာပါ။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ဖန်တီး နိုင်တဲ့အပြင် တခြားလူတွေ တည်ဆောက် ထားပြီးသား shortcuts တွေလဲ သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။
http://googlesystem.blogspot.com/2007/05/shortcuts-for-specil-gmail-labels.html~ ဒါမှမဟုတ် cyber ကနေ အပြန်မှာ Gmail ရဲ့ shortcuts လက်ကွက်တွေကို မေ့သွား နိုင်တဲ့ အတွက် အဲဒီ လက်ကွက် လေးတွေကို print ထုတ်ပြီး အိမ်မှာ သီးသန့် လေ့လာ ချင်တယ်ဆိုရင် အခမဲ့ print ထုတ်ခွင့် ပေးထားတဲ့ gmail shortcuts key တွေကို ဒီလိပ်စာမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
http://mattcutts.com/blog/three-solid-gmail/productivity.tips/~ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Gmail ကို အခြေခံ အဆင့်ကနေ စတင်ပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာ တွေ အထိ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Gmail လျွှို့ ဝှက်ချက် ပေါင်းမြောက်များစွာကို စုစည်းထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ အစုံအလင်ဆုံး လမ်းညွှန်ချက်တွေ ရှိနေတဲ့ လိပ်စာကို သွားရောက် လေ့လာ ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted in: Gmail lock.com
ဒီအကြောင်းအရာနည်းလမ်းကောင်းကလေးအား ဝင်းကမ္ဘာကျော် ဘလောက်ဆိုက်မှ ရေးသားထားသောမှုယင်းအတိုင်း ပြန်လည်ကူးယူ
ဝေမျှလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်....
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 1/05/2012 09:38:00 am
ဂျီမေးလ်ကို ပတ်စ်ဝေါ့ မသုံးပဲဝင်ရအောင် . . .
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်တပ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၂၀) ကျော်
ကွမ်းယာကြိုက်တတ်သောသူများ အတွက် သတိပြုဖွယ်
သင့် အတွက်ကွန်ပျုတာအတွက်အသုံးဝင်သော ကွန်ပျုတာ wind...
အီးမေးပါတ်စ်ဝှက်နှင့် အချက်လက်များခိုးယူနိုင်သည့် ...
သင့်ကွန်ပျုတာအတွက်လိုအပ်နေသာCcleaner အပေါ့ စားဆော ...
ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်စေချင် နည်းလမ်း(၁)
တချိန်က ..ဦးသန့် ပြောတဲ့ စကားလေး...
Folder တွေမှာ မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ အစားထိုးရအောင်...
Windows7အားနည်းချက်တခု
Windows7၏ထူးဆန်း Shortcut key နှစ်ခု အကြောင်း
Window XP ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ...
Gmail account ကို အပြီးဖျက်မယ်
ခရစ်တော်သည် အရိမိတ္တေယျဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်သည် ဟူသေ...
အခမဲ့ရနိုင်သော အီးမေးလ် လိပ်စာများ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာနှစ်ဦးက တစ်ကယ်လူသတ်တရားခံအစစ်လား
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့နီးစပ်ရာ မြန်မာ တစ်ချို့တာဝန်မကျေဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်၊ ဆိုရင်းကိုပြောရယင် ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ ဟာ မလေ...
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျဆုံးခြင်း (သို့) UWSA ဝ စစ်တပ် ပေါ်ပေါက်လာပုံ အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ဘိုးဘိုးအောင် ဖန်ဆင်းတဲ့ ဝ လား...... (၃) ============================ ပဲခူးရိုးမမှ လွင့်စင်သွားခဲ့သော မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ခ)...
Facebook လေးကို အထာကျစေမယ့် MozillaFireFox ရဲ့ addon လေး တစ်ခု .......
ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အင်တာနက်လောက မှာတော့Facebook က ဒုတိယ ဆရာကြီးတစ်ပါးလို့ပြောလို့ရပါတယ်၊ပထမ ဆရာကတော့ G-talk ပေါ့၊ကျွန်တော်လည်းG-talkနဲ့F...
ကျနော် မျက်စိမှာ အမြင်မတော်တာလေးတွေ ကောက်ရေးမိတာပါ။ စာစီစာမှား များပါရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့ပဲ အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ။ ကျနော်တို့ ခေတ်ေ...
ရန်သူ၏ ရေငုပ်သင်္ဘော များကို ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် ''Star Wars" ဟု အမည် ပေးထားသော စက်ရုပ်ရေယာဉ် တစ်စင်းကို မကြာမီ နှစ်...
၂၀၁၃ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမလ အဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်တဲ့ ကေအိုင်အေတို့၏ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နောက်ဆုံးခံစစ်ကုန်း ဖြစ်တဲ့...
ကွန်ပျူတာသုံးရင် နှေးကြတာ လူတိုင်းမကြိုက်ကြပါ ကိုယ့်စက်ကောင်းမကောင်း မသိကြဘူး မြန်ဖို့ ပဲ တွေးနေကြတာ တကယ်တော့RAM Memory နဲ လို့ နှေး...
Kerja Sambilan (RM2,700) Cikgu Tuisyen diperlukan @ Ijok Kuala Selangor / ajar melalui WhatsApp seluruh Malaysia,